Football Khabar » आज स्वर्ण पदकका लागि भारतसँग भिड्दै नेपाल : रच्ला त इतिहास ?
आज स्वर्ण पदकका लागि भारतसँग भिड्दै नेपाल : रच्ला त इतिहास ?
नेपालमा जारी १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्र्तगत महिला फुटबलतर्फ आज स्वर्ण पदकका लागि नेपाल र भारतको फाइनल खेल हुँदैछ । दुई चीर प्रतिस्पर्धी टिम आज उपाधिका लागि आमनेसामने हुन लागेका हुन् । खेल पोखरा रंगशालामा दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुँदैछ ।
राउन्ड एन्ड रोबिन आधारमा समूहका दुई शीर्ष टोलीले फाइनलमा स्थान बनाएका हुन् । जसमा भारत लिग विजेता बनेर फाइनल पुग्दा नेपालले उपविजेता बनेर भारतसँगको भट पक्का गरेको हो ।
आज भारतविरुद्ध उत्रिँदा नेपालका लागि यो खेल विशेष हुनेछ । किनभने, फुटबलमा नेपालका लागि सधैं भारत तगारो बन्दै आएको छ । अघिल्ला वर्ष पनि नेपाल भारतबाट पीडित हुँदै आएको छ । यसअघि लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल भारतसँग १–० ले स्तब्ध बनको थियो ।
नेपाल आज आफ्नो भूमिमा हुने फाइनल खेलमा भारतलाई हराएर स्वर्ण पदक चुम्ने दाउमा छ । नेपाली टोलीले भारतलाई घरेलु दर्शकमाझ हराएर उाधि जित्न सबैखाले प्रयास गर्नेछ ।
हालसम्म नेपालले महिला फुटबलमा स्वर्ण जित्न सकेको छैन । यदि भारतलाई हराउन सके नेपालले महिला फुटबलमा नयाँ इतिहास रच्नेछ । आज पोखराको रमणीय रंगशालमा उत्रिँदा नेपाली टोलीलाई हजारौं घरेलु समर्थकहरूको साथ र हौसला रहनेछ ।
यसअघि नेपालले लिग चरण्को पहिलो खेलमा श्रीलंकालाई ६–० ले हराउँदा दोस्रो खेलमा माल्दिभ्सलाई ३–० ले हराएको थियो । लिगको अनितम खेलमा भने भारतसँग १–० ले हारेको थियो ।
प्रकाशित मिति २३ मंसिर २०७६, सोमबार ०८:३६